Zvigadzirwa Vanogadzira | China Zvigadzirwa Vatengesi, Fekitori
Kupisa kwakakurudzira kwakakurudzira hexagon socket musoro bhaudhi
Rutivi rwekunze rwe screw musoro we hexagon socket musoro bhaudhi yakatenderera, uye iyo yepakati iri concave hexagonal, nepo hexagonal bolt iri iyo iine yakawanda yakajairika screw misoro ine hexagonal micheto. Mushure mekupisa kwekusimudzira pamusoro kurapwa, anti-ngura mhedzisiro inowanikwa.
Kupisa kwakakurudzira External Hexagon Bolt
Kune akawanda mazita akasiyana ekunze hexagonal bhaudhi, semuenzaniso, inogona kunzi yekunze hexagonal bhaudhi, semuenzaniso, inogona kunzi yekunze hexagonal bhaudhi. Iyo inogona zvakare kunzi yekunze hexagonal bhaudhi. Izvi zvese zvinoreva chinhu chimwe chete. Kungoti maitiro emunhu akasiyana.
Stainless simbi hex nzungu dzinoshandiswa pamwe chete nemabhaudhi uye sikuruu yekubatanidza nekusunga zvikamu. Pakati pavo, Type 1 nhanhatu-chinangwa nzungu ndiyo inonyanya kushandiswa Nzungu dzeGiredhi C dzinoshandiswa mumachini, zvishandiso kana zvivakwa zvine huso hwakaomesesa uye zvakadzama zvinodiwa.
Muswe wechipikiri muswe chipikiri unonyanya kuve wakaita muswe wekuboora kana muswe unopinza, uyo unokurumidza kutora musika nekuda kwekushandisa kwayo nyore uye mashandiro ari nyore. Iyo yekuboora muswe chipikiri inogona kushandiswa kuboora maburi pazvinhu zvakasiyana siyana zvekutanga kuti uone kukurumidza splicing uye gungano, ine yakasimba yekunamatira simba, hazvisi nyore kusunungura uye kudonha, iri nyore kwazvo uye nyore kushandisa, uye ine yakakwira chengetedzo chinhu.
Iyo inopisa-yakanyorova nati
Iyo inopisa-yakanyorova nati inoenderana neinopisa-yakanyorova bhaudhi, ndiko kuti, iyo reaming nati inoiswa kune inopisa-kunyudza kwakakurudzira pamusoro pekurapa. Nekuti kupisa kunopisa kwakaputirwa neinc, kudzorerazve kunokosha. Kupisa kwakakurisa kunoonekwa neisina kutsetseka pamusoro asi yakasimba ngura kuramba. Inowanzo shandiswa kunze uye ine 4.8, 8.8, 10.9 uye 12.9 masimba akasimba mamakisi.